Iyada oo la socota Joëlle Ruelle, soo hel Kooxaha, qalabka cusub ee isgaarsiinta iyo qalabka iskaashiga ee Microsoft. Tababarkan, waxaad ka wada hadli doontaa fikradda iyo mabaadi'da hawlgalka ee nooca desktop-ka ee codsigan. Waxaad baran doontaa sida loo abuuro loona maamulo kooxaha iyo kanaalada, waxaad sameyn doontaa wadahadal guud iyo mid gaar ah, waxaad abaabuli doontaa shirar aad ku wadaagi karto dukumiintiyada. Waxaad sidoo kale arki doontaa qalabka raadinta iyo amarka, iyo sidoo kale xulashooyinka barnaamijka iyo dejimaha. Dhamaadka tababarkan, waxaad awoodi doontaa inaad dejiso oo aad u adeegsato Kooxo si aad ula shaqeyso kooxahaaga.
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah Kooxaha Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Xisaabinta dhammaan